Nei Yako PR Dude iri Kukundikana Iwe | Martech Zone
Ndichiri kukoshesa gakava retiTime nguva nenguva, nguva dzese kamwechete kwechinguva rakaringana kuti tigovane hurukuro pano nekuikurukura. Muenzaniso wandiri kupa nhasi wakatanga nevekuburitswa kwepepanhau isu takashanda naDittoe PR pane kuzivisa yavo nyowani Website.
PRDude… anozvizivisa defender yeindasitiri yehukama neruzhinji yakafukidzwa mukusazivikanwa (zano rakakura rezvemagariro), yakatora iyo mupepanhau kuita nekuti haina kukwana chiratidzo chake chei a mupepanhau inofanira kushandiswa… nhau. Ini ndichakutendera kuti uverenge iyo hurukuro:
Zvinosemesa ndezvekuti chimwe chezvikonzero chatinofarira kushanda zvakanyanya nacho Dittoe PR ndeyekuti ivo vanoziva kuti kwavo kuyanana neruzhinji kuita chimwe chikamu chehurongwa hwekushambadzira hwese. Takashanda pane akati wandei evatengi uye takave nemhedzisiro mibairo nekumisikidza midhiya kuburitswa ne yakasimba robhu uye nehukama hwekudyidzana zano. Ichi chakaburitswa nhepfenyuro idanho rimwechete muhurongwa hwese hwekuti isu titaure izvi kuvanhu vazhinji.
Zvinosuwisa kuti vekare-chikoro PR mhando senge PRDude havanzwisise kushambadzira kwakawanda, shanduko yekugadzirisa, kumisikidza peji mazano, kushambadzira, kuziva, kutsvagisa injini ... uye dzimwe nguva havatozive zvese zvakanakira zveruzivo rukuru. Imwe yemakambani makuru eP PR muguta redu nguva pfupi yadarika yakavharwa… iyo indasitiri iri kuchinja uye vakatadza kuenderana. Ini ndinofungidzira kuti ndizvo zviri PRDude kudzivirira.
Ne tweeting pamusoro peizvi - kunyangwe kutsikwa - PRDude yakapa humbowo hwekuti kuburitswa kwedu kwakabudirira. Ini ndinoda icho chokwadi chekuti anobvuma kuti akawana kuburitswa mukuisa kukuru paGoogle News. Izvo zvinotyisa! Isu zviripachena tasvika kune vateereri isu tanga tisati tamboita - chinangwa chekuparadzira kwedu PR. (Sezvineiwo, zvinoita sekunge kugoverwa kwedu kwenzvimbo neimwe nzira kwaenda nyika kune mamwe masayiti.) Isu takagamuchira akawanda ma tweets uye webhusaiti inotaura kubva mukuburitswa.
Press zvinoburitswa hazvisi zvekungonyora "nhau" futi. Iyo PR indasitiri yakashanduka… asi iri kusiya vamwe veayo maPR nyanzvi kumashure. Vatengi nemabhizinesi vari kutsvaga ruzivo kuburikidza nemajini ekutsvaga, nekudaro kuve neinowanikwa yekutsvaga iripo kwakakosha. Vatengi nemabhizinesi vari kuita zvemagariro, saka kuve nehurongwa hwehukama kunokosha. Nekudaro, mazhinji mabhizinesi uye vezvenhau zviwanikwa vachiri kuvimba nemabasa ekuparadzira nhau kuti vawane ruzivo rwavari kutsvaga - saka kuburitswa kwemapepanhau kunoshanda nemazvo.
A yakanyatsogadziridzwa kudhindwa nekuparadzira kukuru kunopa backlinks kubva kumasiti ane masimba akakwirira uye akakosha muindasitiri yako. Isu takaona kukwezva kwakawanda pakuburitswa kwemapepanhau kubva kune vatengi vedu, takaona chimiro chavo chichivandudza, uye takawana akawanda mafambiro nekuvashandisa.
Ini ndichaenderera mberi nekushanda ne chinofambira mberi hukama hweveruzhinji hwakasimba izvo zvinoramba zvichindiwana ini nevatengi vangu mikana inoshamisa muindastiri, kusanganisira zvinyorwa muNew York Times, Cult of Mac, Wired Magazine, iMedia Connection, VentureBeat, Mashable, nezvimwe. Uye kupfuura zvese, vari pachena nezve basa ravo … Vakashinga zvekugovana mazita avo uye yavo yakasimba online.
Saka… PRDude anogona kusabvumirana neni (ava kundipomera pamusoro pekuve nevateveri venhema, zvakare). Zvakanaka, ini handina basa nazvo. Haasi wevateereri vangu uye haana kana chekuziva nezve kugona kwekushambadzira kwese kwatiri kuita. Ipo iye ari kutsikirira kuburitswa kwekushambadzira mukusazivikanwa, tiri kuwana mhedzisiro kune vedu vatengi uye kuwedzera mabhizinesi avo. Ndinovimba rimwe zuva anokwanisa kutengesa mune yake tapureta uye kunyatso tarisa ekutarisa online kwakashanduka sei nzira yatinotaurirana nayo.
Tags: prpr yakasimbaprdudezvinyorwa zvitsvahukama hwevanhu
Yedu Verified Author Links Mhedzisiro mune 484% Yakakwira Dzvanya-Kupfuura Rate
Kuongorora Yako Twitter Kutevera
Dec 28, 2011 pa 10: 30 AM
Hameno kuti zvave nenguva yakadii kubva murume uyu aenderera nedzidzo? Vanapurofesa vari kuyedza nesimba kubvisa pfungwa ye "media" kuburitswa uye vanoomerera pachiri kunzi "media" kuburitswa nekuti… zvakanaka… zvinogona kuita zvese zvawataura, Doug.
Zvita 29, 2011 na3: 33 PM
Ini handina chandinopokana nekushandiswa kwepepanhau kuburitsa senzira yekushambadzira. Izvo zvandaingove ndichinongedzera zvaive zvirimo zvekuburitswa. Wakapedzisira riini kuisa mupepeti wepepanhau kana mugadziri wechirongwa chenhau, chekutanga chavanokumbira kuburitswa. Pamusoro pezvo, iwe paunotumira kuburitswa kwechimiro ichi pamusoro petambo, inotumirwa kumabhokisi emabhokisi evapepeti. Ichi chikonzero nei vapepeti vaine ruvengo urwu kuvanhu vePR vanotumira marara, kana zvirizvo, vatengesi vari kushandisa sevhisi yezvirimo zvisina kukodzera nhau. Ndozvandiri kutaura chete. Kana iko kuri kwekare kufunga, ndokumbiraidza ini chikoro chekare, asi ini ndinofunga zvinokuvadza mucherechedzo kupfuura rubatsiro kana iwe uri kutumira zvisina maturo kuvatori venhau kuti chero munhu ane hafu yehuropi anoziva haazombofi akafukidzwa. Tinogona kupokana izvi zvese zvaunoda, asi isu tinobva kumabasa akasiyana. Ini ndinoremekedza avo vandinotumira zvemukati uye kuyedza kuongorora kuti ndicho chinhu chavangangoda. Izvo ndezve kuvaka hukama kwete kuputika kutumira email pasirese. Goredzva Rakanaka!
Zvita 29, 2011 na6: 14 PM
PR Dude - Ini ndichiri kutora nyaya yekuti "marara" kana "haina nhau". Ini ndataura nezve kusanzwisisika mune ino positi - asi zviripo zviripo zvimwe. Iko kunoratidzika kuve kune imwe mhando ye 'mushambadzi vs yeruzhinji hukama' toni kunze uko. Iyo DK New Media hukama neDittoePR inhau - yechinyakare PR yakasimba yakachinja uye iri kushanda nesangano nyowani renhau. Uye ... iyo nyowani midhiya agency inowana inoshamisa kukosha muruzhinji hukama.
Nekuti iwe haufunge kuti inhau, hazvireve kuti haina. Mhinduro kudepanhau yakaburitsa mhinduro inoshamisa kwazvo. Muchokwadi, chako ndiko chete kushoropodzwa kweruzhinji kwatingawana. Uye, zvakare, kutonga nekuiswa kukuru kwatakagamuchira - yaive nhau dzakatendwa nevamwe vazhinji.
Ndinoyemura kupindura kwako kwakatendeka kuhurukuro, hazvo!
Zvita 29, 2011 na6: 34 PM
Ndinofungidzira kudaro. Ini handina chokwadi chekuti unorevei nekuisa midhiya zvakadaro. Chero chinhu chinoenda patambo chinotorwa nevezvenhau vanonyorera kusevhisi kwayo, asi zvinoreva here kuti mutori wenhau anomisa zvaari kuita kufukidza rudzi urwu renhau. Muna 1996, hongu, muna 2011, kwete. Ini ndinosimudzwa kana paine anoremekedzwa echitatu bato midhiya zvinoburitswa senge Indy Star kana kunyange vatengesi seAdweek kana Ad Age yaizopa uku kutarisisa kwechipiri. Kana iwe ukachikachiza semubatanidzwa kana kudyidzana, saka ini ndinoona kukosha kwenhau. Webhusaiti inogadziriswazve haina kukwana pamiyero yeutapi venhau mumaonero angu. Ini handisi kushoropodza zano, chingori zvirimo. Uyezve, ndanga ndichipindura kune imwe fella kwete kune yako posvo.
Nehurombo, mushambadzi vs. PR chinhu chave chichienderera kwemakore sekuziva kwako. Kwete kuti ndigumbure, asi ini handifarire kutaurwa kunzi mushambadzi. Isu tinoshumira zviviri zvakakosha asi zvakasiyana zvinangwa zvevatengi nemabhureki zvine pakupedzisira, chinangwa chimwe chete. PR vanhu vanovimba zvakanyanya nehukama hwakavakirwa nevapepeti, vagadziri, mablogiki, nezvimwe uye zvinotsamwisa kuvanzwa vachititaurira kuti vanowana zvakawanda zvisina basa nhau dzinoburitswa mumabhokisi avo. Iwe uri blogger mune yekushambadzira nzvimbo. Ungamhanya nenyaya nezve mutengi yakagadzira webhusaiti inogadziriswazve pane yako blog? Ndeapi aungave uchida kunyora nezvawo kana webhusaiti yega yega yakagadzirisa nzvimbo yayo yakatanga kutumira kuburitswa kwenhau nezvazvo? Iwe unoona sei izvo zvakakosha kunyora nezvazvo uye izvo zvisiri? Ndokumbira undiudze kana ndiri kupenga uye ndisingaite chero pfungwa pano. Iwo mazororo uye kwave nemazuva mazhinji achipedzwa kunwa. Mufaro! 🙂
Zvita 29, 2011 na6: 39 PM
PR Dude: Mhinduro ndeyekuti isu tinogadzirisa sei zvekunyora nezvazvo uye kwete zvekunyora nezvazvo. Kana mhinduro yacho yakanaka, isu tinoramba tichishandisa zano. Kana mhinduro yacho yakaipa, isu tinowana imwe nyowani.Mazororo Anofadza kwauri zvakare.
Zvita 29, 2011 na6: 51 PM
Ndatenda. Ndinokushuwira zvakanaka. Ndizivise iwe kana uri muBig Apple uye ndichakutengera chinwiwa. Kwete nharo chete yakanaka scotch. Goredzva Rakanaka!
Ndira 3, 2012 na1: 03 PM
Yekupedzisira inotonhorera kupera kumagakava. Ini ndinobvuma pane zvakawandisa "crap" kunze uko, asi ini ndinofunga kuburitswa kwekuburitswa kwewebhu webhusaiti kwakangonaka, uye ndizvo zvandinoziva kuti zvakanaka PR - zvinoenderana nekambani, vateereri, nzvimbo dzekutengesa dzakaburitswa kusvika, nezvimwe. Ini ndiri kumashure zvachose kwaDouglas pakuburitswa kwake, asi tinobvumirana isu tinofanirwa kungwarira pamusoro pekuwedzeredza kuburitsa. Vamwe blitz zvese, uye zvinokanganisa kuvepo kwavo.
Ndira 5, 2012 na1: 49 PM
Nharo huru yakawira, uye zvakanakisa kuona vanhu vaviri vanogona kubvumirana kusawirirana neruremekedzo! +1 kwamuri mose!
Ndira 13, 2012 na6: 00 PM
Ndatenda. Ini handizive Doug pachangu, asi ndinoziva kuti munhu anoremekedzwa pabasa rake, uye zvisinei nekuti mumwe anobva kupi, isu tese tinofanira kubata mumwe nemumwe neruremekedzo. Ndinoshuva kuti munhu wese akwanise kuita nharo mufambiro wakasimukira kunyanya vanokwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika kana ani zvake anomirira chinzvimbo chakasarudzwa. Ndiri kubheja isu tichave tichiona zvimwe zvakashata uye zvega zvega kurwisa sezvo ma primaries achipisa.